Fandaharana hanovana sary ho horonan-tsary - VidaBytes | LifeBytes
Iris Gamen | 13/06/2022 22:31 | fandaharana
Raha mila manova ny sarinao ho horonan-tsary ianao hanohanana ny tetikasa nomerikao dia eo amin'ny toerana mety ianao. Hanondro ny sasany amin'ireo programa maimaim-poana sy karama tsara indrindra izahay. Hianatra ny fitaovana tsara indrindra ianao mba hanomezana ny sarinao fihodinana 360 degre, manampy ny famoronana sy ny fahafinaretana.
Na ny horonan-tsary na ny sary mihetsika dia singa roa miavaka, satria ao anatin'ny fotoana fohy dia mandefa hafatra mivantana amin'ny mpihaino azy izy ireo. Ny dingan'ny famadihana sary ho horonan-tsary, Mety ho fanamby ho an'ny maro aminareo izany raha tsy mampiasa ireo fitaovana manokana hanaovana izany ianao.
Ny votoaty hita maso na eo amin'ny fiainantsika manokana, amin'ny fampiasana tambajotra sosialy, na any amin'ny toeram-piasana, dia tena ilaina raha misy fiantraikany amin'ny mpihaino samihafa izay afaka mahita antsika. Isika mpamorona, iza Tsy maintsy miantraika amin'ireo mpihaino ireo isika amin'ny fampiasana singa izay mampiavaka antsika amin'ny hafa.
1 Fitaovana tsara indrindra hanovana sary ho horonan-tsary
1.1 Adobe Spark Video na Adobe Express
Fitaovana tsara indrindra hanovana sary ho horonan-tsary
Amin'ity fizarana ity dia hahita a fifantenana kely amin'izay ho antsika dia ny sasany amin'ireo programa tsara indrindra hanovana sary ho video eny an-tsena. Tsy izy ireo no tsara indrindra noho ny famolavolana interface tsara, fa koa noho ny fiasa sy safidy maro azo ampiasaina sy hahazoana vokatra tsara indrindra.
Adobe Spark Video na Adobe Express
Araka ny fantatsika rehetra, ny fonosana Adobe dia fantatry ny matihanina sy tia ny tontolon'ny zavakanto sary, izay ahafahanao manamboatra logos, pejin-tranonkala, famolavolana editorial, sns.
Iray amin'ireo fitaovana azo jerena ny Adobe Spark Video, a fitaovana tena mora ampiasaina ahafahanao mamadika haingana ny sarinao ho video. Ankoatra izany, dia mamela anao ampanjifaina ny lahatsary amin'ny alalan'ny fampidirana lahatsoratra, fanitsiana ny playback fotoana, fifantenana ny fomba amam-panao, sns.
Mila manao fotsiny ianao ampidiro ny sarinao ary ampio amin'ny slide, alamino ny atiny rehetra, na multimedia na lahatsoratra. Ny zavatra manaraka dia ny mifidy lohahevitra iray ho an'ny sary mihetsika ary mampifanaraka izany amin'ny fombanao. Amboary ny fotoana, amboary ny horonan-tsary dia vita ianao.
fitaovana hafa, mpamorona horonantsary sary izay afaka manampy ny maro aminareo hanangona ny sarinao rehetra amin'ny fotoana tianao indrindra, ao anaty iray. Ity programa ity dia fanta-daza amin'ny mpampiasa, ao anatin'izany dia avela hampiditra mozika, sary maromaro miaraka, horonan-tsary hafa, sns.
Tsy maintsy manokatra ny programa ianao, ary ampidiro ny sary tianao. Manaraka, hisafidy môdely na slide ianao hanampiana ireo sary ireo. Alamino ireo singa samihafa araka izay tianao, ovaina, amboarina, ovay habe, sns.. Rehefa izany dia ampio lahatsoratra raha heverinao fa ilaina ary alaivo.
Tena malaza, ho an'ireo ireo mpampiasa mitady hanova ny sariny ho horonan-tsary, ary afaka manao izany amin'ny lahatsoratra ihany koa. Ity fitaovana an-tserasera ity dia ahafahanao mampakatra sary mora sy mamadika azy ireo ho horonan-tsary miaraka amin'ny tanjona hisy fiantraikany amin'ny vahoaka. Azonao atao ny manampy lahatsoratra, modely mahazatra, vokatra, fifindrana, InVideo dia fitaovana feno.
Mila miditra fotsiny ianao, misafidiana amin'ireo modely misy dimy arivo mahery, ampidiro ny sary izay tianao avadika, ampio singa sy fifindrana samihafa ary, farany, alaivo ny rakitra amin'ny vahaolana irina.
Raha te hanova sary ho lahatsary tena mora, ity fitaovana an-tserasera sy ny asa isan-karazany dia hanampy anao. Miaraka amin'ny interface tena tsotra, Animoto dia tsy isalasalana fa programa tsy tokony ho diso ho an'ny matihanina maro amin'ny sehatry ny famolavolana sy amin'ny tontolon'ny multimedia.. Animoto dia manana karazana fifindrana sy fitaovana an-tsoratra mba hitondrana ny famoronanao ho amin'ny ambaratonga manaraka.
Ampidiro ny sary ary fidio ny môdely mifanaraka amin'ny filanao. Avy eo, amboary sy alamino ireo sary ireo, tapaho izy ireo, afindrano, ampio sivana, sns. Ataovy ny sary tsirairay dia manana fomba manokana. Ampidiro lahatsoratra, raha heverinao fa ilaina izany ary mifidiana fomba iray izay mampisongadina ny sanganao.
Fandaharana fanitsiana horonan-tsary miaraka amin'ny fiasa fanovana fototra isan-karazany toy ny fanapahana, fizarana, fampidirana mozika, fampifanarahana, sns. Ity fitaovana ity, mariho fa manana fitsapana maimaim-poana mandritra ny enina andro izy io. Amin'ireo mpampiasa ity karazana fitaovana ity, Nahazo laza tato ho ato ny VideoPad noho ny fikarakarana mora sy ny safidy maro isan-karazany.
Manolotra anao ny fahafahana miasa miaraka amin'ny fifindrana sy endrika 50 mahery, izay ahafahanao mampakatra ny famoronanao amin'ny sehatra toa ny YouTube. Miankina amin'ny isa sy ny lanjan'ny rakitra iasanao, mety hihena izany amin'ny fotoana sasany.
fotsiny Amin'ny tsindry vitsivitsy, dia ho afaka hanao horonan-tsary misy sary an-tserasera amin'ny fomba tena tsotra ianao. Raha misafidy an'io fitaovana io ianao dia ho afaka mamorona horonan-tsary mora foana, mampakatra ny sarinao fotsiny, manova azy ireo, mandamina azy ireo ary mamelona azy ireo.
Ny dingana tsy maintsy arahina mba hahazoana vokatra matihanina dia toy izao manaraka izao; tsindrio ny safidy hamoronana horonan-tsary vaovao ary fidio ny toe-javatra mifanaraka amin'ny filanao. Mandehana manampy sehatra ary manomboka mampiakatra ny sarinao. Ovao ireo rakitra ireo sy ny fika misy. Safidio ny safidy vokatry ny sary ary manomboka mamelona ny sarinao.
Araka ny efa hitantsika tamin'ny fitaovana sisa, Clideo dia iray hafa ahafahanao manova ny sarinao ho horonan-tsary. Raha mahazo ity programa ity ianao dia afaka manampy rakitra samihafa indray mandeha, tsy sary ihany, fa GIFS sy horonan-tsary ihany koa. Sehatra an-tserasera maimaim-poana tanteraka izy io, izay tsy ilana fampiharana fanampiny hafa.
Ampidiro ny sary ankafizinao, amboary amin'ny filaharana ireo rakitra ireo, amboary araka izay tianao, azonao atao ny manapaka azy ireo, manindrona azy, manova azy, sns. Ampio ny raki-peo tianao indrindra, amboary ary Raha maharesy lahatra anao ny vokatra dia aza misalasala mandritry ny segondra iray ary tohizo ny fampidinana.
Tena tsotra, ny dingan'ny famadihana sary ho horonan-tsary miaraka amin'ireo programa ireo izay voalazanay. Tsy maintsy mazava tsara amin'ny sary izay hiarahanao ianao ary mamorona horonan-tsary manaitra. Tsarovy fa ilaina ny mahafantatra hoe inona no fitaovana mifanaraka amin'ny filanao ary iza no mahazo aina indrindra rehefa miasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: LifeBytes » fandaharana » Fandaharana hanovana sary ho video